Iindawo eziNgcono zokungcakaza ze-Crypto 2022 | Iibhonasi, unyuselo kunye nokunye
100% akukho-ncangathi ibhonasi idiphozithi ukuya ku $1k + 50 free spin
100% idiphozithi ibhonasi ukuya 200 EUR
Ii-Giveaways zemihla ngemihla kunye ne-Cashback, kwaye ukuba ulawula ukujoyina iKlabhu yabo yeVIP, unokulindela ukufumana iibhonasi ezinengeniso eninzi
Uvuka uye ku:
100% Idiphozithi Ibhonasi ukuya kuthi ga kwi-1000 yeedola
Iibhonasi ezikhethekileyo ngokujoyina iklabhu yeVIP
Isifuba sokudibana sasimahla esinee-80,000 zemali (~ $ 50 USD)
Ibhonasi yeDiphozithi eyi-100% ukuya kuthi ga kwi-5 BTC
+ 100 Iifreepins
Iibhonasi zeBhonasi ezi-150 ezingahlawulelwayo
Yiya kwi-50% yekhomishini emva kwalo lonke ubhejo obeka kulo
Ukuya kuthi ga kwi-15% yokufumana umva kuko konke ukubheja kwakho!
100 Free osebenzisa
Ukubheja 5 mBTC
200% ibhonasi yediphozithi ukuya kuthi ga kwi-300 €
Isimahla iRooWards Rakeback yokunyusa amandla
100% idiphozithi ibhonasi ukuya ku 5BTC kunye 100 Free Spins
inkqubo VIP, jackpot okuqhubekayo & imiphetho indlu ephantsi
Ibhonasi yaBadlali abaDala
Ukuya kuthi ga kwi-5 BTC / BCH / ETH okanye kwi-1000 USDT!
Iindaba zokungcakaza Iindaba zokubheja Itekhnoloji yoNgcakazo Slot News
Ithetha ukuthini i-RTP?
Ngamana 16, 2022 0 104
I-Crypto News Iindaba zokungcakaza
IiVPN ezigqwesileyo zoNgcakazo lweCrypto ngo-2022
Matshi 25, 2022 0 641
Iindawo eziNgcono zokungcakaza zeCrypto 2022
Kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zeesayithi zokungcakaza ze-crypto phaya. Abanye bakuvumela ukuba ubheje kwimidlalo, abanye bakuvumela ukuba ubheje kwisitokhwe, abanye bakuvumela ukuba ubheje kwezopolitiko, njalo njalo. Kodwa into ebenza bahluke kukuba bonke bayayamkela imali ye-cryptocurrensets njengentlawulo. Oku kuthetha ukuba awudingi ukuguqula imali yakho ibe yimali ye-fiat kuqala, enokuthatha iintsuku okanye iiveki ngokuxhomekeke kwindawo ohlala kuyo.
Ilayisensi, uKhuseleko, kunye noBulungisa
Amazwe amaninzi anemithetho elawula ukungcakaza kwi-Intanethi, nto leyo ethetha ukuba kubalulekile ukujonga ukuba ilizwe lakho liyakuvumela ukungcakaza kwi-Intanethi. Amanye amazwe aluvumeli naluphi na uhlobo lokungcakaza konke, ngoko unokufuna ukuziphepha ezo. Kwamanye amazwe, kuphela iindlela ezithile zongcakazo ezivumelekileyo, ezinje ngepoker, imidlalo yekhasino, ukubheja kwezemidlalo, njalo njalo. Kukwangumbono olungileyo ukukhangela amava ongcakazo kwi-intanethi ngelayisenisi ekhutshwe ligunya elaziwayo. Ukusebenzisa i-casino enelayisensi kubaluleke kakhulu!
Ukhuseleko lolwazi lwakho lobuqu yenye into ekufuneka uyiqwalasele xa ukhetha indawo yokungcakaza ye-crypto. Qinisekisa ukuba indawo isebenzisa itekhnoloji yoguqulelo lwe-SSL ukukhusela idatha yakho ngelixa usenza iintengiselwano. Kwakhona, qiniseka ukuba indawo ibonelela ngobunyani bezinto ezininzi, oku kuthetha ukuba kuya kufuneka ukuba ufake iinkcukacha ezongezelelweyo zokungena ngaphandle kwedilesi yakho ye-imeyile.
Unyuselo kunye neebhonasi
Iindawo zokungcakaza ze-Crypto zibonelela ngeebhonasi zekhasino kubadlali babo be-crypto. Ezi bhonasi ziza ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanywa i-spins yamahhala, iibhonasi zediphozithi, iibhonasi zokuthumela, kunye nokunye. Kufuneka usoloko ufunda imigaqo kunye neemeko zolunyuso ngononophelo ngaphambi kokuba ubhalise. Amaxesha amaninzi, ezi bhonasi zifuna ukuba ubheje isixa-mali esithile kwindawo phambi kokuba ufumane ibhonasi. Ukuba uphumelele, uhlawulwa ngokusekelwe kwisixa-mali sokuqala semali oyibeke phantsi kunye naziphi na ii-winnings ezivela kwimijikelo elandelayo yomdlalo.
Ezona ndawo zibalaseleyo zokungcakaza kwe-crypto zikwabonelela ngentengiso rhoqo ukugcina abadlali babo be-crypto benomdla. Amaxesha amaninzi, olu nyuso lubandakanya iminyhadala ekhethekileyo, iitumente, izipho, iibhonasi zediphozithi, nokunye. Ezinye iiwebhusayithi zide zinike iBitcoin okanye i-Ethereum nyanga zonke! Oku kuxhaphake kakhulu phakathi kwabadlali abathembekileyo, abadla ngokufumana iibhonasi zesisa.
Ngoku kukho ngaphezu kwe-1,000 cryptocurrencies ekhoyo namhlanje, kwaye nganye ineengenelo zayo kunye nokungalunganga. Ngokomzekelo, i-Bitcoin inkulu ngenxa yeemali eziphantsi zokuthengiselana, kodwa kuthatha malunga nemizuzu eyi-10 ukuqinisekisa ukuthengiselana. ILitecoin ilungile kuba iyakhawuleza, kodwa ayinayo phantse umthamo weBitcoin.
Abanye abantu bakhetha ukusebenzisa iialtcoins endaweni yeBitcoin kuba bakhetha isantya esisezantsi sokuthengiselana kwezi ngqekembe. Abanye bakhetha ukusebenzisa iiBitcoins kuba baziva bekhuselekile kunealtcoins. Ke, ngokwenyani yehla ekukhetheni. Into ebalulekileyo ekufuneka uyiqaphele kukuba i-crypto oyisebenzisayo ukufaka idiphozithi ikwayi-crypto enye ekuya kufuneka uyisebenzise ekutsaleni imali kwimidlalo emininzi yekhasino ekwi-intanethi.
Abasebenzisi abasebenzisa i-cryptocurrencies badla ngokuzama ukuphepha iimali zemveli ezifana ne-USD, EUR, GBP, kunye neCAD. Babona ezi zimali zicotha kakhulu, zibiza kakhulu, kwaye azithembekanga. Ii-Cryptocurrencies ziphantsi kolawulo, okuthetha ukuba akukho mntu ulawulayo. Kunoko, zilawulwa zizigidi zabasebenzisi abasebenzisa ii-nodes (iiseva) kwiikhomputha zabo. Ngenxa yoku, ii-cryptocurrencies zikhuselekile kakhulu, kwaye azikho phantsi kokunyuka kwamaxabiso.
Ezi mpawu zithetha ukuba zifanelekile kwiikhasino ze-intanethi. Ekubeni ii-cryptocurrencies zizimeleyo ngokupheleleyo koorhulumente, iibhanki, kunye namagunya aphakathi, zikhuselekile kungenelelo lukarhulumente. Logama nje usebenzisa iwebhusayithi ethembekileyo nethembekileyo, awuzukuba nexhala malunga nokuqhathwa.
Iingenelo zokuSebenzisa i-Crypto kuNgcakazo
Zininzi iingenelo zokusebenzisa i-crypto xa ungcakaza. Enye yazo kukungaziwa. Oku kuthetha ukuba akufuneki uchaze isazisi sakho komnye umntu. Enye inzuzo kukuba ikuvumela ukuba ubheje naphi na emhlabeni ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuba uhlala phi.
Enye inzuzo kukuba unokungcakaza nanini na ufuna. Akukho zithintelo malunga nexesha onokubeka ngalo ukubheja kwakho. Kwaye akukho mfuneko yokuba ulinde kude kube lusuku olulandelayo ukuze ubone ukuba ubhejo lwakho lube njani na.
Xa kufikwa kubumfihlo, unokukhetha ukuhlala ungaziwa okanye hayi. Ukuba uthatha isigqibo sokungena kwi-akhawunti yakho ngokungaziwa, ngoko awuyi kuba nexhala malunga nedilesi ye-IP elandelwayo.
Uninzi lweeSayithi zoNgcakazo ze-Crypto zikwabonelela ngokhetho olukhulu lwemidlalo, ebandakanya ngokuqinisekileyo imidlalo oyithandayo efana neendawo zokubeka, iroulette, iblackjack, i-baccarat, i-poker, amakhadi okuqala, kunye nokunye - Zonke iikhasino ezidweliswe kwindawo yethu, zibonelela ngokupheleleyo. imidlalo efanelekileyo.
Ukubheja kwezemidlalo ngeCrypto
I-Cryptocurrency yindlela yekamva. Yitekhnoloji entsha eye yaguqula indlela abantu abaya kuba nakho ukutshintshiselana ngayo ngexabiso kungekudala, kwaye sele ilapha. Iindaba ezimnandi zabathengi bezemidlalo kukuba ngoku banokusebenzisa i-cryptocurrency abayithandayo njengenye indlela yokuhlawula xa bebheja kwimisitho yezemidlalo. Eli phepha liza kuchaza ukuba kutheni kufuneka ucinge ngokusebenzisa i-crypto kwiimfuno zakho zokubheja.
Best Crypto Casino Imidlalo
Eyona midlalo ilungileyo ye-crypto yileyo ibonelela ngenqanaba eliphezulu lolonwabo kunye nolonwabo. Ezona khasino zidumileyo kwi-intanethi bezibonelela ngezi ntlobo zemidlalo ixesha elide ngoku, kodwa kusekho indawo yokukhula kule ndawo. Ukuba ufuna ukudlala okona kulungileyo yekhasino yekhasino imidlalo, ke kufuneka ujonge uluhlu lwethu ngasentla. Oku kuya kukunceda ufumane iisayithi ezingcono ezinenani eliphezulu lemidlalo ephezulu ekhoyo. Sikwabonelela ngolwazi malunga nomdlalo ngamnye ukuze wenze isigqibo esinolwazi xa kufikwa ekukhetheni indawo oyithandayo.
Ukhetho olubanzi lweMidlalo ye-Slot
Imidlalo ye-Slot yeyona midlalo idumileyo yekhasino. Banoluhlu olubanzi lwemixholo eyahlukeneyo kunye noyilo, olunokufumaneka kulo naliphi na iqonga lekhasino le-intanethi. Oomatshini be-slot bakunika ithuba elihle lokuphumelela imali enkulu ngaphandle kokuchitha ixesha elininzi okanye umzamo. Kufuneka ucofe iqhosha lokujikeleza kwaye ulinde inombolo yakho yethamsanqa ukuba ivele phezulu kwesikrini. Apha kulapho uya kubona ukuba zingaphi iingqekembe oziphumeleleyo okanye ozilahlekileyo kulo mjikelo othile. Ukuba ufuna ukudlala ngaphezulu komatshini omnye, ungakwenza oko ngokucinezela iqhosha elithi "Spin Kwakhona".
Kukho iintlobo ezininzi zeendawo zokubeka ezikhoyo kwimarike namhlanje. Ezinye zazo ziquka:
Slots Classic - Ezi lolona hlobo indala kwiindawo zokubeka. Ngokuqhelekileyo babonisa iireli ezi-3 kunye nemigca emi-5 yokuhlawula.
Izitshixo zeMilatho emininzi - Ezi zifana neendawo zokubeka zakudala, ngaphandle kokuba zibonakalisa imiqolo emininzi endaweni yesihlanu.
Progressive Slots - Ezi zifana kakhulu kwiindawo zokubeka multi-line, ngaphandle kokuba zivumela abadlali ukuba baphumelele amabhaso ngelixa ukusonta.
Imijikelo yeBhonasi – Le yimijikelo yebhonasi enika abadlali amathuba awongezelelweyo okuphumelela amabhaso amakhulu.
Izikhala zeVidiyo-Ezi ziindawo zokubeka ividiyo ezisekwe kwimifanekiso eshukumayo kunye nesandi.
Jackpot Progressive - Ezi jackpot kwiindawo zokubeka ezigcina ukukhula ngokuhamba kwexesha.
Uninzi lwekhasino ye-cryptocurrency inikezela ngenkxaso ye-24/7 yengxoxo. Bahlala beneqela elizinikeleyo lenkonzo yabathengi elilungele ukuphendula yonke imibuzo yakho. Ukongeza, ezinye zeendawo zongcakazo eziphezulu ze-crypto nazo zibonelela ngenkxaso yefowuni ukuze ukwazi ukubabiza ngokuthe ngqo ukuba ufuna uncedo ngayo nantoni na. Uninzi lwamaqela eenkonzo zabathengi asebenza ubusuku nemini ukuze ungabi naxhala malunga nokubamba umntu xa sele kuhlwile.
Main Online Gambling ababoneleli Game
Kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zemidlalo ekhoyo, kubandakanya iindawo zokubeka kwi-intanethi, imidlalo yetafile, ukubheja kwezemidlalo, i-poker, amakhadi okukrwempa, kunye neminye. Abanye bababoneleli abakhulu baquka:
Abadali bezihloko eziyintsomi ezifana neStarburst kunye neGonzo's Quest, ecaleni kwezinye iindawo zokubeka ezidumileyo njengeNcwadi kaRa, Cleopatra, kunye neMega Moolah. Bahlala besenza imidlalo eyamkelwa kakuhle luluntu.
Omnye wabaphuhlisi besoftware abaziwayo kwishishini lokungcakaza kwi-Intanethi, BetSoft yaziwa ngokudala eminye imidlalo eyonwabisayo yekhasino ngeenxa zonke. Izihloko zabo ziquka ezakudala ezifana Blackjack, Roulette, Baccarat, kunye Craps.
Umboneleli okhokelayo wezisombululo zokudlala, iPlayTech inoxanduva loomatshini abaphumeleleyo abakha badalwa. Bakwangabadali beejackpot eziqhubekayo ezifana neMega Moolah, enye yamabhaso amakhulu ejekhiphothi emhlabeni.
Enye yeenkampani ezindala kwishishini, Microgaming isahamba ngamandla emva kwayo yonke le minyaka. Basebenza ngokukhethekileyo ekuboneleleni imidlalo yekhasino ekumgangatho ophezulu, zombini iselula kunye nedesktop.
Isigebenga sokwenyani kushishino. Ukuhlala kakhulu kwi-blackjack ephilayo kunye ne-roulette, baziwa kakhulu kwimidlalo edumileyo efana neCrazy Time, iMonopoly Live, kunye neRoulette yoMbane. Ngokwenene ukwenza amava okutshintsha umdlalo kunye nemidlalo yabo ekhethekileyo.
Khetha indawo ethembekileyo ye-Crypto Gambling
Ukuze ungcakaze ngokukhuselekileyo nangokukhuselekileyo, kufuneka ukhethe iqonga elithembekileyo. Oku kuthetha ukukhetha enye enika amathuba afanelekileyo, intengiselwano ekhuselekileyo, kunye nendawo ekhuselekileyo. Ezinye iiplatifti zinika iibhonasi zabadlali abatsha, ngoko ke kusoloko kufanelekile ukujonga into abanokuyinika.
Akufanele ubeke imali engaphezulu kunokuba uceba ukuyichitha nangaliphi na ixesha. Kungenjalo, ungaphela ulahlekelwe yiyo yonke into.
Online Casino Intlawulo Terms
Yonke i-casino ngaphandle ine-ruseet yayo, equka iimeko zayo zokuhlawula.
Eminye imizekelo yezi inokuba:
Ubuninzi beemali zokutsalwa kweVeki nangeNyanga
Eyona ndlela ilungileyo yokufumana ulwazi oluthe kratya malunga nendlela esebenza ngayo i-casino ethile kukufunda ngokwemigaqo nemiqathango yayo. Kuya kufuneka uqinisekise ukuba uyazi kakuhle into ozifaka kuyo ngaphambi kokuba ubhalise kwikhasino ekwi-Intanethi.
Uyisebenzisa njani i-Crypto Gambling site kwaye uthenge i-Crypto?
Ngokungeniswa kwe-crypto, abantu ngoku banokufikelela kukubheja kwimidlalo yekhasino ekwi-Intanethi ngaphandle kokukhathazeka malunga nokutshintshiselana ngemali. Ngapha koko, uninzi lwezona ndawo zibalaseleyo zokungcakaza kwe-crypto zamkela i-Bitcoin, i-Ethereum, iLitecoin, iDash, iDogecoin, iMonero, iRipple, kunye neZcash.
Ngaba zonke iisayithi zeCrypto Gambling zikhuselekile?
Kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zeesayithi ze-crypto yekhasino phaya, ngoko ke kubalulekile ukwazi ukuba banikezela ngantoni. Abanye baya kwamkela i-Bitcoin kuphela, abanye baya kuthatha naluphi na uhlobo lwemali yedijithali, kwaye abanye baya kwamkela zombini. Kukwafanelekile ukujonga ukuba isiza sinikezela ngebhonasi okanye ijikelezisa simahla. Ezi bhonasi zinokukunika inzuzo enkulu kukhuphiswano.
Ndiyithumela njani i-crypto?
Ukuthumela imali nge-cryptocurrency kulula. Konke okufuneka ukwenze kukufumana inkonzo eyamkelayo kwaye emva koko udlulisele imali kwidilesi enikezelwe ngutshintshiselwano. Ezinye iinkonzo ziya kuhlawulisa umrhumo woku, ngoko jonga imigaqo kunye neemeko ngaphambi kokuba ubhalise. Xa isipaji sakho se-crypto sisekiwe, ulungele ukwenza idiphozithi yakho yokuqala ye-crypto-Ithamsanqa ngendlela yakho entsha yokuhlawula.
Ngaba kunokwenzeka ukurhoxisa i-crypto kwiindawo zokungcakaza kwi-Intanethi?
Ewe, uninzi lweekhasino ezikwi-Intanethi ziya kukuvumela ukuba urhoxise imali yakho yokuwina umva kwindlela yokuhlawula oyisebenzisileyo kwidiphozithi yakho. Ukongeza, ezinye iikhasino ze-intanethi zibonelela ngeebhonasi, oku kuthetha ukuba zikunika imali eyongezelelweyo ukuba ungcakaza kwindawo yazo. Ezi bhonasi zinokuza ngohlobo lwe-spins zasimahla, i-cashback, okanye ibhonasi yomdlalo wepesenti.
Ngaba yinyani ukuba iindawo zokungcakaza ze-crypto zine-RTP embi?
Hayi, oku akuyonyani. Uninzi lweendawo zokungcakaza ze-crypto zinemilinganiselo yokuhlawula efanayo njengezinye iindlela zongcakazo. Kwiimeko ezininzi, ide ibonelele nge-RTP engcono, ngenxa yokuba ineendleko zokusebenza eziphantsi.
Ngaba ndingathembela kwiiCasinos zeCrypto?
Xa kufikwa ekuthembeni kwindawo yokungcakaza ye-crypto, kuxhomekeke kumqhubi. Baninzi abasebenzi abakhohlakeleyo abaya kuqhatha abasebenzisi ngemali abayisebenzele nzima. Nangona kunjalo, kukho abaqhubi abasemthethweni ababonelela ngenkxaso egqwesileyo yabathengi kunye nokunceda nanini na kufuneka. Kuhlala kungcono ukuphanda indawo nganye ngocoselelo phambi kokufaka imali. Iisayithi esizidwelisa kwindawo yethu zijongiwe ngokuqinisekileyo, kwaye siqinisekisile ukuba uya kudibana neekhasino kuphela onokuthi uzithembe.
I-Blockchains isasazwa iileja ezirekhoda ukuthengiselana phakathi kwamaqela. Bavumela abasebenzisi ukuba baqinisekise utshintshiselwano ngaphandle kokuthembana. Oku kubenza babe luncedo kwizinto ezinjengokulandelela ubunini be-asethi, ukuqinisekisa ukuba azichithwanga kabini, kunye nokurekhoda iivoti.
Ngaba ungadlala imidlalo yomthengisi ngeCryptocurrencies?
Ewe Unga! Iikhasino ezininzi ezikwi-intanethi ziyakuvumela ukuba udipozithe imali ye-crypto uze ubheje kwimidlalo enjenge-roulette, iblackjack, i-baccarat, i-craps, kunye ne-poker.
Ngaba kunokwenzeka ukuba ukugembula kunye Bitcoin Cash?
I-Bitcoin Cash (BCH) yenye inguqulelo yeBitcoin. I-Bitcoin Cash ihluke kwi-BTC kuba ibandakanya iimpawu ezenzelwe ukuphucula isantya sokuthengiselana kunye nokunciphisa imirhumo. Ngenxa yoko, ifaneleke kakhulu ukusetyenziswa njengendawo yotshintshiselwano kunevenkile yexabiso. Ungayisebenzisela ukungcakaza njengoko ubuya kwenza kulo naluphi na uhlobo lwe-cryptocurrency.
Ngaba kunokwenzeka ukuba uthenge i-cryptocurrencies ngeKhadi leThredithi?
Ewe, ngababoneleli abanje MoonPay, kunye ne-UTORG. Zombini ezi nkampani zibonelela ngokuthengwa kwangoko kwee-cryptocurrencies ngekhadi letyala.
Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa ikhadi lam lokubambisa ukuze uthenge i-cryptocurrencies?
Kulunge ngokugqibeleleyo ukusebenzisa ikhadi lakho ledebhithi ukuthenga ii-cryptocurrencies. Amakhadi okuhlawula amatyala alawulwa ngamaziko emali, nto leyo ethetha ukuba alandela imithetho engqongqo malunga nokuba yimalini anokuyisebenzisa. Ukuba ufuna ukuqiniseka ukuba ikhadi lakho alivaleki, ngoko ke qinisekisa ukuba awugqithi kwinkcitho yakho yemihla ngemihla.
Ngaba zonke ii-cryptocurrencies ziyalingana xa kufikwa ekungcakazeni?
Hayi akunjalo kwakona. Iingqekembe ezahlukeneyo zineempawu ezahlukeneyo, kubandakanya ukuguquguquka, ukungabikho kwemali, kunye nokhuseleko. Umzekelo, Bitcoin ihlala inxulunyaniswa nokuguquguquka okuphezulu, ngelixa i-Litecoin ithande ukuzinza ngakumbi. Xa ukhetha ingqekembe ukuba usebenzise ukugembula , kubalulekile ukuqwalasela uhlobo lwamava ofuna.
Ndilurhoxisa njani uloyiso lwam?
Iisayithi zokungcakaza ze-Crypto zivumela ukurhoxiswa ngokuthe ngqo kwisipaji sakho se-crypto. Abanye baya kufuna ubungqina besazisi, abanye abayi kufuna. Qinisekisa ukuba ujonga imigaqo kunye neemeko ngononophelo ngaphambi kokuba urhoxe.
Yeyiphi eyona ndlela ilungileyo yokurhoxisa imali yam yokuwina? Ngaba ndingayikhupha ngefiat?
Kukho iindlela ezimbini eziphambili zokurhoxisa i-winnings yakho: ngqo kwi-fiat, okanye ngokungathanga ngqo kwenye i-crypto. Ukurhoxa ngokuthe ngqo kwi-fiat kuthetha ukuba uthumela imali yakho kutshintshiselwano, oluyiguqulela kwiimali ze-fiat. Ngokungangqalanga ukurhoxa kwi-fiat kubandakanya ukuthumela lokuwina kwakho kwidilesi eyeyotshintshiselwano. Utshintshiselwano lubandakanya iCoinbase, iKraken, iBitfinex, iBinance, kunye neGemini. Nje ukuba urhoxile lokuwina kwakho, kufuneka uguqule umva kolunye uhlobo lwemali yedijithali.
Zisebenza njani iiCasinos zeBitcoin?
Iikhasino zeBitcoin yeyona ndlela idumileyo yokudlala kwi-Intanethi. Unokusebenzisa iiBitcoins zakho ukugembula kwaye uphumelele imali yokwenyani. Ezi sayithi zinemidlalo emininzi, kodwa nazo zineempawu ezizodwa ezibenza bahluke kwezinye iindawo zokungcakaza. NgeBitcoin phakathi kwezona zimali zidumileyo, zininzi iindlela onokukhetha kuzo.
Yintoni Bitcoin Casino?
Ikhasino ye-bitcoin yindawo ye-intanethi apho unokugxumeka khona ngeebitcoins endaweni yemali ye-fiat. Umahluko omkhulu phakathi kwekhasino yemveli kunye nekhasino ye-bitcoin kukuba akukho gunya liphakathi elilawula umdlalo okanye inkqubo yokuhlawula. Endaweni yoko, zonke iintengiselwano kwisiza zenzeka peer-to-peer (P2P). Oku kuthetha ukuba xa ufaka imali kwi-akhawunti, iya ngqo kumntu ophethe i-wallet yedijithali ephethe imali. Kusebenza okufanayo xa urhoxisa lokuwina kwakho.
Dlala ividiyo yePoker ngeCryptocurrencies
Ukuba ukhetha ukudlala ividiyo yepoker, kufuneka wazi ukuba ixesha elininzi, uya kulahlekelwa. Kuyinyani ukuba abanye abadlali banokuza nenzuzo, kodwa uninzi lwabantu lugcina luphulukene nalo lonke stake. Nangona kunjalo, ukuba uzimisele ukuthatha umngcipheko, unokujika inzuzo encinci.
Zeziphi ezona ntlobo zibalaseleyo zemidlalo yepoker yevidiyo?
Ezona ntlobo zibalaseleyo zemidlalo yepoker yevidiyo zezo zibandakanya izandla ezinobungozi. Ezi ziquka iiJacks okanye ezingcono, i-Bonus Poker, i-Double Bonus Poker, i-Deuces Wild, i-Joker Poker, kunye namashumi okanye eNgcono.
Ngaba ndingadlala ividiyo yepoker ngaphandle kokukhuphela nantoni na?
Ngokuqinisekileyo awufuni nayiphi na isoftware yokudlala ividiyo yepoker. Ngapha koko, zininzi iiwebhusayithi apho unokudlala ividiyo yepoker ngaphandle kokukhuphela nantoni na.
IiCasino zeCrypto vs iiCasino zesiNtu
Iikhasino zesiNtu bezikho ukusukela kumaxesha amandulo, kwaye ziseyenye yeendlela ezidumileyo zokubheja namhlanje. Banika amathuba amahle, ukuzonwabisa okumangalisayo, kunye noluhlu olubanzi lwemidlalo.
Nangona kunjalo, xa kuziwa kungcakazo ye-crypto, izinto zahluke kakhulu. Ngokungafaniyo neendawo zekhasino ezikwi-Intanethi, ezi ndawo azifuni ukuba abadlali bahlawule nantoni na ngaphambili. Endaweni yoko, baxhomekeke kwitekhnoloji ye-blockchain ukucubungula ukuthengiselana. Oku kubenza bakhuseleke kakhulu, kwaye kunika ukurhoxiswa kwangoko.
Iziza zongcakazo ze-Crypto ziselubala ngokupheleleyo, oku kuthetha ukuba yonke into irekhodwa kwi-blockchain. Abadlali banokubona ngqo apho imali yabo iya khona, kwaye banokulandela yonke intengiselwano eyenzekayo. Okufanayo akunakusoloko kuthethwa malunga neendawo zokungcakaza zemveli.
Le nto elubala yinto engafumanekiyo kwiikhasino zemveli. Ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba iidiphozithi zakho ziya ekuhlawuleni amatyala akho endaweni yokufaka iipokotho zomnye umntu, kuya kufuneka ukhethe indawo yekhasino ekwi-intanethi enegama elihle. Sinikezela ngophononongo olukhulu lwekhasino kwindawo yethu, kwaye sinethemba lokuba uya kufumana uphononongo olugqibeleleyo lwekhasino kwiimfuno zakho.
Sibeka njani iCrypto Gambling websites eziphezulu
Kukho iintlobo ezininzi zeesayithi ze-crypto yekhasino phaya, ngoko ke kubalulekile ukwazi ukuba loluphi uhlobo ofuna ukudlala kulo. Abanye banikezela ngoluhlu olubanzi lwemidlalo, abanye bagxile kumdlalo omnye kuphela. Ezinye zisekwe kwitekhnoloji ye-blockchain, ezinye azinjalo. Bonke baya kukucela ukuba ufake imali kwiakhawunti yakho kuqala. Siseka amanqanaba ethu kwizinto ezininzi ezahlukeneyo, ezinje ngesantya sokurhoxa kwabo, ukubheja okukhulu, ukhetho lomdlalo, iibhonasi nokunye.
Ukuqukumbela: Yeyiphi eyona ndawo ilungileyo yokungcakaza ye-Crypto?
Kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zekhasino ye-crypto phaya, nganye ibonelela ngeseti yayo eyahlukileyo yeempawu. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ufumana indawo ehambelana neemfuno zakho. Umzekelo, ukuba ufuna ukudlala ngemali yokwenyani, kuya kufuneka ujonge i-casino ethembekileyo njengoko igutyungelwe kweli phepha.
Siyathemba ukuba eli nqaku likuncedile ukuba uthathe isigqibo sokuba uyafuna na ukuzama ukungcakaza nge-crypto. Kukho izinto ezininzi onokukhetha kuzo, ngoko akufanele ube nangxaki yokufumana indawo ehlangabezana nazo zonke iimfuno zakho.
1 Iindawo ezilungileyo zokuNgcakaza nge-Crypto ze2022
1.1 Ilayisensi, uKhuseleko, kunye noBulungisa
1.2 Unyuselo kunye neebhonasi
1.3 Ukwamkelwa kwee-cryptocurrencies
1.4 Iingenelo zokuSebenzisa i-Crypto kuNgcakazo
1.5 Ukubheja kwezemidlalo ngeCrypto
1.6 Best Crypto Casino Imidlalo
1.7 Ukhetho olubanzi lweMidlalo ye-Slot
1.8 Iqela leNkxaso yoMthengi
1.9 Main Online Gambling ababoneleli Game
1.10 Khetha indawo ethembekileyo ye-Crypto Gambling
1.11 Online Casino Intlawulo Terms
1.11.1 Ubuncinci bediphozithi
1.12.1 Uyisebenzisa njani i-Crypto Gambling site kwaye uthenge i-Crypto?
1.12.2 Ngaba zonke iisayithi zeCrypto Gambling zikhuselekile?
1.12.3 Ndiyithumela njani i-crypto?
1.12.4 Ngaba kunokwenzeka ukurhoxisa i-crypto kwiindawo zokungcakaza kwi-Intanethi?
1.12.5 Ngaba yinyani ukuba iindawo zokungcakaza ze-crypto zine-RTP embi?
1.12.6 Ngaba ndingathembela kwiiCasinos zeCrypto?
1.12.7 Yintoni iTekhnoloji yeBlockchain?
1.12.8 Ngaba ungadlala imidlalo yomthengisi ngeCryptocurrencies?
1.12.9 Ngaba kunokwenzeka ukuba ukugembula kunye Bitcoin Cash?
1.12.10 Ngaba kunokwenzeka ukuba uthenge i-cryptocurrencies ngeKhadi leThredithi?
1.12.11 Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa ikhadi lam lokubambisa ukuze uthenge i-cryptocurrencies?
1.12.12 Ngaba zonke ii-cryptocurrencies ziyalingana xa kufikwa ekungcakazeni?
1.12.13 Ndilurhoxisa njani uloyiso lwam?
1.12.14 Yeyiphi eyona ndlela ilungileyo yokurhoxisa imali yam yokuwina? Ngaba ndingayikhupha ngefiat?
1.12.15 Zisebenza njani iiCasinos zeBitcoin?
1.12.16 Yintoni Bitcoin Casino?
1.13 Dlala ividiyo yePoker ngeCryptocurrencies
1.13.1 Zeziphi ezona ntlobo zibalaseleyo zemidlalo yepoker yevidiyo?
1.13.2 Ngaba ndingadlala ividiyo yepoker ngaphandle kokukhuphela nantoni na?
1.14 IiCasino zeCrypto vs iiCasino zesiNtu
1.15 Sibeka njani iCrypto Gambling websites eziphezulu
1.16 Ukuqukumbela: Yeyiphi eyona ndawo ilungileyo yokungcakaza ye-Crypto?
Eyona ilungileyo yokungcakaza kweCrypto
© Ilungelo lokushicilela 2022 Crypto-Gambling.net
Nxibelelana / Yenza intengiso